Ny wxWidgets 3.1.4 GUI Development Kit dia eto ary ireto no vaovao | Avy amin'ny Linux
Ny wxWidgets 3.1.4 GUI Development Kit dia eto ary ireto no vaovao
Navoaka ny kinova vaovao avy amin'ny toolkit multiplatform "WxWidgets 3.1.4" izay voatendry ho an'ny famoronana interface interface ho an'ny sehatra Linux, Windows, macOS, UNIX ary finday.
Ny Toolkit voasoratra amin'ny C ++ ary zaraina eo ambanin'ny Lisansa Library wxWindows maimaim-poana, nankatoavin'ny Free Software Foundation sy ny OSI.
Miorina amin'ny LGPL ny fahazoan-dàlana ary miavaka amin'ny famelana anao hampiasa ny teny anao manokana hizarana ireo asa derivatif amin'ny endrika binary. Ho fanampin'ny famolavolana programa C / C ++, wxWidgets dia manome rohy ho an'ireo fiteny fandefasana programa malaza indrindra, anisan'izany ny PHP, Python, Perl, ary Ruby.
Tsy toy ny fitaovana hafa, wxWidgets dia manome rindranasa mitady tompon-tany tena izy ho an'ny rafitra kendrena, mampiasa ny rafitra API fa tsy hanahafana GUI.
wxWidgets dia faritana tsara indrindra ho toy ny kitapo teratany satria manome sosona mahafinaritra ho an'ny fanaraha-maso teratany ny lampihazo, mifanohitra amin'ny fakana tahaka ny fanaraha-maso amin'ny fampiasana sary ntaolo. Ny fampiasana fifehezana teratany amin'ny sehatra efa misy dia ahafahantsika mahazo valiny hita maso bebe kokoa ho an'ny interface graphic noho ny tranomboky hafa toa ny Swing (ho an'ny Java), ary koa ny fanolorana fampisehoana tsara kokoa sy tombontsoa hafa.
wxWidgets dia tsy vitan'ny famolavolana ny interface interface fotsiny, fa satria ny tranomboky dia manana ambaratongam-pifandraisan-davitra, fiasa ho an'ny tambajotra toy ny faladiany, ary maro hafa.
1 Fampisehoana vaovao lehibe an'ny wxWidgets 3.1.4
1.1 Sintomy wxWidgets
Fampisehoana vaovao lehibe an'ny wxWidgets 3.1.4
wxWidgets 3.1 dia napetraka ho sampana fampandrosoana, mamolavola endrika vaovao ho an'ny kinova miorina manaraka, 3.2.0. Raha ampitahaina amin'ny sampana 3.0 dia misy tsy fitoviana API ambaratonga maro ary ny ABI dia tsy azo antoka hijanona eo anelanelan'ny kinova vonjimaika 3.1.x.
Mikasika ireo zava-baovao atolotra ao amin'ity kinova vaovao ity, misongadina ny rafitra fananganana nevo miorina amin'ny CMakeAnkoatr'izay, ny rafitra fananganana dia manampy fanampiana ho an'ny mpanangona vaovao (MSVC 2019, g ++ 10) sy ny rafitra miasa (macOS 10.14 ary macOS 11 ho an'ny ARM).
Fanatsarana iray hafa miavaka amin'ity kinova vaovao ity ny fanatsarana ny filaminana amin'ny fotoana maharitra amin'ny alàlan'ny fampandehanana ny fiovam-po tsy misy dikany mampidi-doza eo amin'ny wxString sy ny "char *".
Etsy ankilanynamboarina daholo ireo tranomboky an'ny antoko fahatelo. Nanampy fanampiana ho an'ny WebKit 2 sy GStreamer 1.7, ho fanampin'ny fanatsarana mifandraika amin'ny fanohanan'ny fenitra C ++ 11 sy ny fanampiana ny fivorian'ny mpamorona C ++ 20 dia nampiana.
ihany koa fanasongadinana ny fanavaozana ny fanohanany OpenGL, nohatsaraina ny fampiasana kinova vaovao an'ny OpenGL (3.2+), ary koa ny fanohanan'ny hetsika vaovao momba ny fihetsika mifehy nilalao tamin'ny totozy.
Amin'ireo fanovana hafa misongadina amin'ity kinova vaovao ity:
Fanatsarana lehibe no natao tamin'ny kilasy wxBusyInfo, wxDataViewCtrl, wxNotificationMessage, wxStaticBox, wxStyledTextCtrl, ary wxUIActionSimulator.
Nanampy ny fahaizana mamaritra ny soatoavina tsy-isa amin'ny wxFont sy wxGraphicsContext rehefa mamaritra ny haben'ny endri-tsoratra sy ny sakan'ny pensilihazo jiro.
Ao amin'ny wxStaticBox, ampiharina ny fahafaha-manao marika tsy ara-dalàna amin'ny Windows.
Fanohanana nohatsaraina ho an'ny fisehon'ny piksela avo (DPI avo).
Nanampy fanampiana ho an'ny famatrarana LZMA sy fisie ZIP 64.
Kilasy vaovao natolotra: wxActivityIndicator, wxAddRemoveCtrl, wxAppProgressIndicator, wxNativeWindow, wxPowerResourceBlocker, wxSecretStore ary wxTempFFile.
Nanampy ny fanohanana ny tsanganana mangatsiaka sy ny laharana ao amin'ny wxGrid.
Vahaolana maro ao amin'ny seranan-tsambo wxGTK3 sy wxOSX / Cocoa.
Seranan-tsambo wxQt andrana vaovao.
Finalmente Raha liana te hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao, azonao atao ny manamarina ny antsipiriany amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Ho an'ireo izay liana afaka misintona sy mametraka ity fitaovana ity dia afaka mahazo ny fonosana ho an'ny rafitra fiasa kendrena (Windows, Mac na Linux) amin'ny tranokala ofisialy ao amin'ny fizarana fampidinana azy.
Ny rohy dia ity.
Raha ireo izay mampiasa Debian, Ubuntu na ny derivative sasany amin'ireny dia afaka manangona amin'ny alàlan'ny fanoratana ireto manaraka ireto ao amin'ny terminal izy ireo.
sudo apt-get install libgtk-3-dev build-essential checkinstall
Manohy mamaha ny fonosan'izy ireo avy amin'ny tranokala ofisialy izy ireo ary mampiditra ny fampirimana vokatr'izany. Eto izy ireo dia afaka manokatra fantsona miorina amin'ny làlan'ny folder na mametraka ny tenany ao anaty fampirimana ao amin'ny terminal.
Ary manohy manangona miaraka amin'ny:
../configure --disable-shared --enable-unicode
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ny wxWidgets 3.1.4 GUI Development Kit dia eto ary ireto no vaovao
David, ilay mena84 dia hoy izy:
Tsy tiako izay nanjary bilaogy, feno dokambarotra, mahatsiravina, fady amin'ny taboola etsy sy eroa, miditra fotsiny eto aho dia matahotra sao ho voan'ny virus ny solosainako. Ry zalahy a, aza sulely ny lova navelan'ny tompona bilaogy teo alohanareo, satria bilaogy tena nahafinaritra io.
Valio i David, ilay mena84
Laxer OS, Arch Linux misy Gnome izay tsy mitaky loharano sy bika tsara loatra
Ny mamatonalina komandy 4.8.25 dia efa navotsotra ary izao ny vaovaony